Juventus oo sare u qaaday qiimaha ay ku dooneyso Axel Witsel laakiin… – Gool FM
(Turino) 01 Agoosto 2016. Naadiga xafidaneysa horyaalka Serie A ee Juventus ayaa la warinayaa inay sare u qaaday qiimaha ay ku dooneyso Axel Witsel, laakiin 7-milyan ayay weli u jirtaa qiimaha ay dalbaneyso kooxda Zenit St Petersburg.
Maadaama lagu wado in Paul Pogba uu lacago rikoodh ah ugu biiri doono kooxda Manchester United Bianconeri ayaa baadi goobeysa xiddig qad dhexe oo badel u noqda.
Xiddiga qadka dhexe ee Chelsea Nemanja Matic ayaa la aaminsan yahay inuu yahay bartilmaameedkooda koowaad, laakiin tababare Conte ayaa aad uga cago jiidaya inuu laacibka reer Serbia ka tago Stamford Bridge.
Marco Verratti oo ay sidoo kale hunguriyaynaysay Juve ayaa af cad ku sheegay inuusan ka tageen PSG xagaagan sidaa darteed Tuttosport ayaa aaminsan in Witsel yahay midka iminka la waydiisan karo.
Kooxda reer Talyaani ayaa ka gudbisay wiilka reer Belgium dalab 23-milyan, yeelkeede kooxda Everton ee ka dhisan Ingiriiska ayaa soo bandhigeysa 30-milyan oo euro, sidaa darteed uma badna in kooxda reer Russia ay ku iibin doonto lacago intaa ka yar.
Inkastuu Witsel doorbidayo inuu ku soo biiro kooxda lagu naaneyso Marwada Duqda ah, waxay u muuqataa inay tahay inay sare u qaadaan dalabkooda si ay u keenaan Turino.
“Waa qofka ugu dambeeya ee yimaada Tababarka, laakiin marka wax la cunayo waa safka hore.”. David Luiz iyo saxiixa cusub ee PSG Ben Arfa oo si xun isugu camirtay